FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA CHESTIE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Chestie Dog
Alika mifangaro mifangaro Chihuahua / West Highland White Terrier
Fangaro mix Keely the Chihuahua / West Highland White Terrier F2 amin'ny 10 volana— 'Amin'ny 1½ taona izy dia milanja 8 - 9 pounds. Tena be fitiavana izy, tia mifampikasoka, ary saro-kenatra amin'ny olon-tsy fantatra. Noheveriko fa ny mampiavaka ny Chihuahua dia mety hifangaro amin'ireo toetra Westie, saingy tsy dia manana ny fihetsika, ny fihetsika ary ny toetran'ny Chihuahua izy ... ary ny sofina be !! '
Ny alika Chestie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Westie . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ny alika mixeur an'ny mpamorona rehetra izao no miteraka volafotsy 50% ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Chesador
Mpanoratra International Canine Registry®= Chesador Retriever
'Ity no fanampiana vaovao ho an'ny fianakavianay. Schatzi no anarany ('sweetie' amin'ny teny alemà) ary izy no bug-pitiavana kely mamy indrindra! Izy dia mix Chestie (Chihuahua / West Highland White Terrier). Te hanana Westie ho ahy foana aho, mifototra amin'ny zavatra novakiako momba ilay karazana. Avy eo, hitako tamin'ny alàlan'ny famonjena famonjena ny biby ity zazalahy kely ity ary nijery ny tarehiny kely aho ary raiki-pitia. Rehefa nentiko nody izy dia noheveriko fa hibolisatra ny vadiko fa izy koa tia azy. Schatzi dia 6 volana ary milanja 5,6 lbs. Izy dia nanandrana ny maro tamin'ireo tandindona 'adala' alika kely manandrana, toy ny: manenjika ny vavahady malalantsika, miakatra amin'ny ondana avo indrindra eo ambony sezalà hitondrana toy ny mpanjaka kely, sns. Aza avela hivoatra izy ' aretin'alika kely . ' Mandeha tsara izy ary vokatr'izany, na eo aza ny fahatanorany, dia milamina sy afa-po ihany izy rehefa avela irery . Ity sary ity dia Schatzi miaraka amin'ny vadiko mijery fahitalavitra. '
Belle ilay renim-pianakaviana Westie miaraka amin'ireo zanany vavy mifangaro Chestie— 'Niara-nitombo ny Chi sy Westie aho hijery izay hataon'izy ireo ary tonga tamin'ny anarana hoe' Chestie 'ary tamin'ny naha mpiompy ahy dia nanolotra ny anarana tany amin'ny ACHC. Nanana tatary telo aho ary mitovy ny endrik'izy rehetra, omena na raisina ny marika fotsy. Nanana zanak'osy 11 aho. Iray ihany no nivoaka fotsy ny tavany. Nivoaka niaraka tamin'ny volo lava an'ny Westie izy rehetra. Boribory mainty daholo, ny sasany misy fotsy tsy misy. Ny reny dia ny Westie ary tena mahazatra ary ny raim-pianakaviana dia Chihuahua lehibe tokoa, intelo ny habeny mahazatra. Maneso ny olona fa izy no Chihuahua lehibe indrindra manerantany ary mena mena izy. '
Alika kely mifangaro Chestie (Chihuahua / Westie mix)
Odin, Chestie (alika mifangaro Chihuahua / Westie)
Styx, Chestie (Chihuahua / Westie mix dog)
Aphrodite, alika Chestie (Chihuahua / Westie mix dog)
Keely the Chihuahua / West Highland White Terrier F2 mifangaro amin'ny 5 volana
'Keely the Chihuahua / West Highland White Terrier F2 mifangaro alika kely amin'ny 4 volana, milanja 4 pounds - ny reniny dia hazo fijaliana mitovy aminy ary ny dadany koa. Ny reniny dia manodidina ny 8 -10 pounds ary mitovy aminy. Ny rainy dia eo amin'ny 5-6 pounds. Ny mpamboly azy dia manantena fa ity littler niavian'i Keely ity dia tokony ho 5 - 6 pounds koa. Matetika no manana alika kely ity raim-pianakaviana ity rehefa lehibe. Mihevitra izahay fa manana endrika Chihuahua izy, saingy heveriko fa afaka miova ihany koa izany. '
Keely the Chihuahua / West Highland White Terrier F2 afangaro alika kely amin'ny 9 herinandro, milanja 2 kilao
Hijery ohatra hafa momba ny Chestie
Sary Chestie 1
landihazo tulear yorkie mix
mixer boxer orona mena
espaniola ny akoho espaniola miloko volomboasary sy fotsy